*ENTSHA* Ikhabhathi yokuLoga w/Imboniselo yeLanga-Kufuphi neGrand Canyon!
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguGarrett
Ikhabhathi entle yokungena kwi-acre yomhlaba efumaneka ngokulula nje i-15 min ukusuka edolophini Williams kunye nemizuzu engama-45 ukusuka ekungeneni kweGrand Canyon. Bukela ukutshona kwelanga kwiveranda kwaye ufumane ukuphumla okuyimfuneko kunye nokuphumla. Ikhabhinethi yindawo egqibeleleyo yokubaleka egcwele i-rustic charm!
Le yikhabhathi yelogi ye-800 sq ft kwindawo entle eyi-acre enkulu. Kukho indawo eninzi evulekileyo! Ngasemva kwendlu inomgodi womlilo kwaye ikhabhathi ineveranda enkulu onokuthi uyonwabele.
Ikhitshi - Ikhitshi lixhotyiswe ngezinto ezibalulekileyo ezifana neembiza/iipani, izitya, ioli yomnquma, ityuwa kunye nepepile kunye nezitya. Kukho ifriji encinci phantsi kwekhawunta ekhoyo ukuba uyisebenzise. Sikwabonelela ikofu, iti kunye netshokholethi eshushu!
Igumbi lokuhlala-Ikhabhathi ine-Wifi. Sibonelela ngeNetflix, iHBO kunye neDisney + ukuba uyisebenzise ngexesha lakho lonke lokuhlala kwakho.
Amagumbi okulala - Kukho amagumbi okulala amabini aneebhedi zendlovukazi, oomatrasi benkumbulo, kunye nemiqamelo etofotofo. Sibonelela ngazo naziphi na iilinen, iitawuli kunye neengubo ozifunayo ukuhlala kwakho!
Igumbi lokuhlambela - Kukho igumbi lokuhlambela eligcweleyo elineshampu, i-conditioner, kunye nokuhlamba umzimba. Ukonga amanzi, ishawari inentloko yeshawari ehamba kancinci. Kukho amanzi ashushu eshawa xa ekwisetingi yokuqukuqela okuphantsi, kodwa akayi kukwazi ukufudumeza amanzi okuhlamba.
Ikhabhinethi ayinayo umoya wokupholisa umoya
NCEDA UQAPHELE: Kufuneka ukwazi ukuphakama izitepsi ezi-4 ukuze ungene ekhabhathini. Imililo ayivumelekanga xa kukho ukuvinjelwa komlilo kwingingqi. Ngoku sikwinqanaba lesi-2 lothintelo lomlilo njengoko ingozi yomlilo igqithise. AKUKHO MILILO ivumelekileyo ngeli xesha
Ungabukela iPolar Express kunye noololiwe beGrand Canyon Railroad bedlula kwiveranda engasemva! Ikhabhinethi ibekwe kanye ngaphandle kwe-AZ-64 kwindlela emdaka egcinwe kakuhle nefikelelekayo ngayo nayiphi na imoto.
Kukho abamelwane abakufutshane
Umbuki zindwendwe ngu- Garrett
Siya kufumaneka ngencoko okanye ngefowuni ngexesha lokuhlala kwakho. Nceda ungalibazisi ukunxibelelana nathi ukuba unayo nayiphi na imibuzo!